China High Quality Battery Cell Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
ဘက်ထရီ Cell Holder
Battery Cell Holder ကိုချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူစေရန် pin ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော CR2032 ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သည်။
Battery Cell Holder ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
Thru Hole Mount (THM) & Surface Mount (SMT) ကို 20X3.2mm ဆဲလ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤ Battery Cell Holder ကို PA66 94-V0 ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆက်အသွယ်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုများကိုအာမခံနိုင်ပြီးအဆက်အသွယ်ခုခံမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံသောဤအကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူများသည်အဓိကဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများအားလုံး၏လစ်သီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်များအားလုံးကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော notched battery slot ကိုပေးသည်။
Battery Cell Holder ၏ Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် CR2032 ဘက်ထရီဆဲလ်လက်ကိုင်
ပစ္စည်း: PA66 94-V0, ကြေးဝါနီကယ် Plated
ဘက်ထရီအရွယ်အစား Î¦20*3.2 မီလီမီတာ
3. ဘက်ထရီဆဲလ်ကိုင်ဆောင်သူ၏ထုတ်ကုန် Feature နှင့်လျှောက်လွှာ
၁။ ဤ Battery Cell Holder သည် ၃.၀v ဘက်ထရီကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်
4. 1 × CR2032 ဓာတ်ခဲများကိုကိုင်ထားသည်
6. အရည်အသွေးမြင့် PA66 94-V0 ပစ္စည်း
4. Battery Cell Holder ၏ Product Details
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: CR2032 ဘက်ထရီဆဲလ်လက်ကိုင်
ပစ္စည်း: A66 94-V0, ကြေးဝါနီကယ်
၅။ Battery Cell Holder ၏ Product Qualification
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Battery Cell Holder အားလုံး
7. Battery Cell Holder ၏အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
hot Tags:: ဘက်ထရီဆဲလ်ကိုင်ဆောင်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ စတော့၊ အစုလိုက်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ Made၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ လျှော့စျေး၊ စျေးနည်း ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်